Shirkad Cusub oo Muqdisho ka higelineysa adeeg casri ah oo lagu dalban karo taksiyada iyo bajaajta – Radio Muqdisho
Shirkad Cusub oo Muqdisho ka higelineysa adeeg casri ah oo lagu dalban karo taksiyada iyo bajaajta
Shirkad cusub oo ay Soomaali leedahay ayaa dhowaan magaalada Muqdisho ka billaabi doonta adeeg casri ah oo dadweynuhu ku dalban karaan taksi ama bajaaj iyagoo jooga gurigooda ama goobtooda shaqo.
Shirkaddan oo magaceeda la yiraahdo DALBO (Taksi iyo Bajaaj) ayaa adeegsan doonta teknooljiyada casriga ah ayaa u sahli doonta qof kasta oo haysta taleefoonka gacanta inuu dalban karo taksi ama bajaaj, waxayna dhinaca kale taasi fursad siin doontaa wadayaasha bajaajta oo sii kordhaya, iskuma ciriirinaya waddooyinka waaweyn.
Ka sokow nidaamka dalbashada, wuxuu adeeggan horumarin doonaa xirfadda iyo aqoonta wadayaasha bajaajta, iyadoo loo sameynayo horumarin iyo tababarro joogto ah.
Adeegyada ay soo keeneyso Shirkadda Dalbo waa kuwo la jaan-qaadi doona nidaamka lagu dalbado taksiyada ee ay hormuudka u tahay shirkadda Uber. Hase yeeshee, midka Soomaaliga wuxuu xoogga saari doonaa bajaajta maadaama ay tahay gadiidka dadweynaha ee ugu badan ee la adeegsado.
Mas’uuliyiinta shirkadda Dalbo ayaa sheegay in baahidan ay dareemeen ka dib markii ay suuqa ka baxeen dhammaan shirkadihii taksiyada ee aasaasmay sanadkii 2011 iyo 2012, taasoo ay ugu wacneyd tartan aan loo baahneyn oo lagu galay suuq aan weyneyn.
Mas’uuliyiinta shirkadda ayaa sheegay inay dareemeen in magaalada Muqdisho u baahan tahay shirkad buuxisa baahidaas oo u dhabar-adeygta tartanka ku-dayashada ee badanaa dhabar-jebiya ganacsiyada Soomaalida, ugu dambeyntana keena in suuqa laga wada baxo.
Daawo Sawirrada: Jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa oo Xaflad mahadcelin ah u sameysay Turkiga
Shir looga hadlayey la dagaalanka fikirka Xagjirka ah oo Magaaladda Muqdisho lagu qabtay “Sawirro”